धरानमा भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न फारम वितरण - Everest Daily News
धरान । धरानमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न फारम वितरण कार्य सुरु भएको छ ।
आज (आईतबार) बिहान धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राईले धरानको १५ नं. वडा कार्यालयबाट फारम वितरण कार्य सुरु गर्नु भएको थियो । सहजिकरण समितिका संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख राईसहितको टोलीले धरानको १३, १६, ११, १७, ४, ५ र ८ नं. वडा कार्यालयमा पुगेर फारम वितरण गरेको हो । यि वडाहरुमा धरानको सबैभन्दा बढी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास रहेका छन् । बाँकी रहेका वडाहरुमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरुलाई आज धरान उपमहानगरपालिकामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा नगर प्रमुख राईले फारम वितरण गर्नु भएको छ ।
लगत संकलन ईकाईका संयोजक वेदप्रसाद सापकोटाले भूमि आयोगले उपलब्ध गराएको फारम धरान उपमहानगरपालिकाले वडाहरुमा वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वडा नं. १ मा ३० वटा, २ मा २५ वटा, ३ मा ९२ वटा, ४ मा १५० वटा, ५ मा १६९० वटा, ६ मा ५६५ वटा, ७ मा ३० वटा, ८ मा ३६५ वटा, ९ मा १० वटा, १० मा ३३ वटा, ११ मा १४५६ वटा, १२ मा २५ वटा, १३ मा ५६५ वटा, १४ मा १५० वटा, १५ मा ११०७ वटा, १६ मा ४६३ वटा, १७ मा १२११ वटा, १८ मा २५ वटा, १९ मा १०६ वटा, २० मा १८७ वटा फारम वितरण गरिएको छ । आयोगले धरानको लागि १४ हजार ५ सय फारम उपलब्ध गराएको थियो । फारम पाए पनि वडा नं. १५ र १३ ले मात्र फारम भर्न शुरुवात गरेको सापकोटाको भनाई छ । अन्य वडाहरुले आवश्यक तयारी गरेर सम्भवतः भोली सोमबारदेखि फारम भर्न थाल्ने बताइएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नगर प्रमुख तिलक राईको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले कही कतै समस्या आएमा समाधान गर्न सहजीकरण गर्नेछ । यस्तै, वडास्तरमा पनि सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
नगर प्रमुख राईले वडाहरुमा फारम वितरण गर्दै रातो फारम देशभरि आफ्नो परिवारको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा नहुनेले भर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सेतो फारम आफ्नो नाम वा परिवारको नाममा कही जग्गा भएपनि ऐलनी जग्गामा बसिरहेको वा घेराबार गरेर बसिरहेकाहरुले भर्ने फारम भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘रातो फारम भर्नेले एक पटक निःशुल्क जग्गा पाउनुहुन्छ, सेतो फारम भर्नेले सरकारले तोकेको न्युनतम शुल्कमा राजश्व तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ, कति जग्गा पाउने भन्ने यसको विधि छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नगर प्रमुख राईले वास्तविक सुकुम्बासी, वास्तविक भुमिहिन र वास्तविक अव्यवस्थितलाई माात्र फारम भराउन आग्रह गर्नु भएको छ । फारममा वडाअध्यक्ष र सम्बन्धित टोलका वडा सदस्यले, वडा सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो टोल र वडामा फारम भर्नेहरुलाई राम्रोसँग हेर्न समेत नगर प्रमुख राईले आग्रह गर्नुभयो । ‘वडा सदस्यले, अध्यक्षले, सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । आफ्नो टोलको राम्रोसँग मान्छे हेनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ,’ नगर प्रमुख राईले भन्नुभयो, ‘भोली सर्जमिन मुचुल्का हुन्छ । नहुने मान्छे सिफारिश भयो भने कारबाही हुन्छ ।’ कर्मचारीहरुले पनि दिनभरिमा भरेको फारम घर लैजान नपाउने र साँझ भएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
धरानमा आईतबारदेखि भुमिहिन तथा सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न फारम वितरण